IDIWALI 2019: UMHLA, AMAXESHA KAMUHURAT KUNYE NOKUBALULEKA- PAMPEREDPEOPLENY.COM - YOGA-YOKOMOYA
IDiwali 2019: Umhla, iMuhurat kunye nokuBaluleka
Ekhaya Yokomoya yeYoga Imibhiyozo Imithendeleko oi-Neha Ghosh Ngu UNeha Ghosh ngo-Okthobha 25, 2019
IDiwali yenye yeminyhadala ebhiyozelwa eIndiya. Umnyhadala ubonakalisa ukuphumelela kokukhanya ebumnyameni kwaye kulo nyaka uzakubhiyozelwa nge-27 ka-Okthobha. IDiwali livela kwigama lesiSanskrit elithi Deepavali elithetha uluhlu lwezibane. Imibhiyozo iqala eDhanteras nge-25 ka-Okthobha, iChhoti Diwali nge-26 ka-Okthobha, kunye neDiwali nge-27 ka-Okthobha.
Ngokwekhalenda yamaHindu, uDiwali uwa ngomhla weAmavasya okanye inyanga entsha kwinyanga yeKarthik. UDiwali kubhekiswa kuye njengo-Deepapratipadutsava kwinkulungwane ye-17 ye-Sanskrit edlala uNagananda. Kulo mdlalo, izibini ezisandul 'ukutshata zazinezibane ezineziphiwo ekukhumbuleni umtshato ka-Lord Vishnu kunye noThixokazikazi uLakshmi. Ke, ngalo mhla uninzi lwamaHindu lunqula kwaye lufune iintsikelelo zikaThixokazikazi uLakshmi.
Ngokwentsomi edumileyo, uDiwali naye ubhiyozelwa ngalo mhla kuba u-Lord Rama noSita babuya emva kweminyaka eli-14 beselubhacweni kwaye abantu base-Ayodhya babasa izibane ezininzi zodongwe okanye ii-diyas ukubhiyozela ukugoduka kwabo.
Ibhiyozelwa njani iDiwali?
Abantu bayokundwendwela abahlobo babo kunye neentsapho zabo ngeebhokisi zeelekese. Ezi iilekese zibandakanya i-kaju barfi, i-rasgulla, i-coconut ladoo, kunye ne-gulab jamun. Iziqhamo ezomileyo kunye namandongomane kunye nezinye izidlo ezinencasa ezifana ne-bhujiya, kachori, gathiya, chakli, kunye ne-samosa nazo zihanjiswa kwi-Diwali.
UPuja Muhurat weDiwali
Nge-27 Okthobha, 2019 (ngeCawa): IDiwali Lakshmi Puja muhurat iqala ngo-06: 43 emva kwemini kwaye iphele ngo-08: 15 ngokuhlwa.
ubunyusa njani ubungakanani bebele
I-Amavasya Tithi iqala nge-12: 23 pm nge-27 ka-Okthobha, 2019 kwaye iphele ngo-09: 08 nge-28 ka-Okthobha, 2019.
I-Kumbha Lagna muhurat (emva kwemini): 02: 14 pm ukuya kwi-03: 42 pm.
I-Pradosh Kaal iqala nge-05: 41 pm ukuya nge-08: 15 pm.
Umthambo weyoga ukunciphisa amafutha esiswini
IVrishabha Kaal iqala ngo-06: 43 ukuya ku-08: 39 emva kwemini.
IVrishabha lagna muhurat (ngokuhlwa): 06: 42 pm ukuya 08: 38 pm.
Ngomhla wama-28 ku-Okthobha, 2019 (ngoMvulo): Simha lagna muhurat (ezinzulwini zobusuku) -1: 12: 00 ukuya ku-3: 30 kusasa.
Wonwabile uDiwali kunye noNyaka oMtsha!
isimilo sabantu abazelwe kwimatshi
Umhla we-varalakshmi we-2020 kumhla wekarnataka
izinto zokuhombisa ekhaya ezivela kwizixhobo zenkunkuma
indlela yokulungisa iinwele ngokwemvelo
izimvo zokunxiba ezintle kumanenekazi aseIndiya
iziselo zokunciphisa umzimba ekhaya
Ngu-2 Okthobha iholide yesizwe